Basa Rebhinzi YeMunhukadzi - Ndepapi Panonaka Pa Beans NePoto PaBonde Basa Rebhinzi YeMunhukadzi - Ndepapi Panonaka Pa Beans NePoto PaBonde
Basa Rebhinzi YeMunhukadzi - Ndepapi Panonaka Pa Beans NePoto PaBonde
Apa ndiri kungotaura kuitira kuti varume vahwisise nyaya yemufambire wekunakigwa kwemunhukadzi . Kana wahwisisa woona wega zvokuita nenyaya yacho.
Chatisingadi ndechokuti murume ohwisisa obva angoita STRESS nazvo oshaya chokuita pazviri chinofambisa zvinhu mberi. Vakuru vakati “Apiwa njere apiwa ufumi.” Saka iwe kana waziva zvinoitika chiratidzawo kuti uri mufumi.
Pano ndoda kokombeya kunakigwa kunoita mukadzi kunobva panzvimbo mbiri dzinoti bhinzi nechitubu. Chinonetsa kukombeya uku ndechokuti kana une murume maitire ake panzvimbo idzi akasiyana.
Bhinzi pamukadzi chinhu chakaita sokuti paanga ari mudumbu muumbi akazana kugadzira chombo chomukomana ndokuzoti chiregai ndirege nokuti uyu musikana. Saka pachiri ndipo pamwepo pane chombo pavakomana. Kuratidzika kwacho kwakangofananazve nechombo, kungozosiyana kuti usu buri reweti riri pazasi pebhinzi revarume riri mukati mechombo. Asi Bhinzi ine ganda (foreskin) rakangofanana nerechombo asi redu tinohi CLITORAL HOOD. Rakatofukidza bhinzi zvachose.
Kana mukadzi akatanga kuita zemo, bhinzi inotomirawo sezvinoita chombo asi kuti bhinzi idikidiki zvokuti kana wada kuhwisisa saizi yayo funga paya uri kuPrimary School muchishandisa penzura dzine maRUBBER kumashure. Chirhabha chinenge chakabatira papenzura chiri mukati me chisimbhi. Chidimu cherhabha chinenge chichionekwa ndichochikuru zvishoma pa bhinzi yomukadzi.
Tingati kutangira pa hafu ye sendimita kana zemo pasina. Asizve kune vamwe vakadzi vane chikuru kupfuura ipapo kusvika kuma 2 cm.chivete hacho. Kuzoti mukadzi aita zemo chinokwanisa kukura zvakasiyanasiyana sezvinongoitawo zvombo zvevatume asi hazvizoiti kuti uwane mukadzi ane bhinzi inopfuura 5cm ane zemo. Kana variko vashoma. Vakawanda bhinzi inongoita 1-2 centimetres.
Pamberi pese hapo panonaka kutamba napo, ndingangoti muchiuno mese mberi neshure, magaro napamberi pese nenyama dzese dzakabatana nechiuno, zvidya, dumbu, zvese nokushure kwemabvi zvinonaka kana murume achitamba nazvo. Pano tongoda kukombeya pabhinzi nmuchitubu chete, zvimwe izvo tombosiya kwanhasi.
Murume kana achida kunyatso konekita nomukadzi wake uchihwa mukadzi achiudza vanhu kuti ndakawana SOUL MATE wangu, zvinowanikwa pakuhwisisa kuti SWITCH yemukadzi ibhinzi yake sezvakangoitawo varume . Kuhwisisa murume kuremekedza chombo chake, kunova ndiko kubvuma kuti iye murume ini ndiri mukadzi. Iyewo anofanira kubvuma kuti ndiri mukadzi iye murume saka ngaaremekedze bhinzi yangu. Murume asingahwisisi bhinzi akafana nomukadzi anoiginowa chombo.
Vakawanda vanofunga kuti chitubu ndicho KEY yeukadzi , asi ini ndoti ibhinzi. Tichitarisa kupedza kwemukadzi pakurhojana tinoona kuti kana mukadzi akashandwa zvakanaka pabhinzi anokasira chose kupedza pane kuti akashandwa zvakanaka pachitubu. Toti mageza maenda kumubhedha iwe wageza nemvura inodziya kupfuura muviri saka muviri wati rukutu uye hauna chimwe chinokunetsa mufungwa, murume akaziva makwizire enyama dzakapoteredza bhinzi achiziva kusveta mazamu zvine puresha kwayo haunonoki, kozoti akasvitsa rurimi pabhinzi, unoita souchatofa.
Kuchitubu uku shuwa kunoda kupinzwa chombo as kune Psychology yako yakatosiyana uye kunaka kwacho kwakasiyana mafambire ako. Murume kuti apinze chombo ndini ndamuvhurura. Zvakafanana nevavhimi. Muvhimi akateya mhuka kana shiri, ikauya ikapinda mumuteyo wake, muvhimi ndiye anoti agona. Mhuka hapana chayagona. Isu vakadzi tinoteya murume kusvika apinda mumuteyo. Apindamo ini Kwii kumubata. Unoona makumbo aya anga akavhugwa, akochekegwa kuseri kweemurume. Maoko emukadzi abatirira murume, kumusunga mumuteyo kuti asabvapo asina kusiya chimwe chinhu ipapo. Chitubu ndicho chinoitisa mukadzi nomurume kuti vave pamwe chete. Murume kana ari mukati memukadzi ipapo ndewemukadzi.
Tii iri mukapu ndeyekapu iyoyo
Mbudzi iri mudanga ndeyedanga iroro.
Chinhu chese chipenyu chinogara muEnvironment yacho.
Zvakadaro murume ari mandiri ndewangu.
Iyi POSSESSION ndiyo yatinodira kuti murume apinze chombo muchitubu. Zvinonaka chose kana hana yako yakagadzikana uye uchihwa kuda kushandisa chiuno, asi kunaka kwacho kunobva pakuti pakukoira, chombo chichipinda chinodhonzerera nyama dzokuno kubhinzi, pakubuda nyama dziya dzodzokera panzvimbo yadzo, achingodaro kunaka kuchiwedzera nokuti kuri kubva kuno kubhinzi.
Vanoziva vanoti maNERVES anonobatana pabhinzi apa anobva nokumativi echitubu akaita se LETTER V yakatarisa mudenga. Kukwizana kunoita chombo nemadziro echitubu kunokwiza tsinga idzi dzinobva kubhinzi dzichipfuura nomumadziro echitubu dzozosvikawo kumwe dzaparadzana zvinoreva kuti pavakunaka sepanhu paviri apa. maNERVES awa anonogumira pabhinzi abva mativi maviri zvoreva kuti pabhinzi ndipo pane akawandisa ari pamwe chete. Ndizvo uchiona kuti pamwe kubata bhinzi kunonetsa nokuti haidi kubatwa. (too sensitive) Kungosvinyanga nyama dzakatenderedza.
Chitubu ndechokubatisa murume, uye ndechomurume. Dai mukadzi asina chitubu dai pasina murume ane basa nemukadzi. Kungozonakigwa nokupinzwa chombo muchitubu kunakigwawo hako kokungoti ndirambe ndichiita asi hapasipo pane HQ yokunakigwa.
Kazhinji kana mukadzi ari ega achizvibababata ega murume asipo, haapinzi chinhu muchitubu make. Anongotangira nokugumira pabhinzi. Zvoreva kuti anohwisisa kuti ndipo panoitisa kunakigwa kwake. Murume anohwisisa maitire emukadzi wake kana ari ega akagona kuita saizvozvo pamukadzi wake murume akachenjera. Tanga wanakira mukadzi wako zviri pamusoro, wozopinza hako chombo womupedzisa. Mukadzi ane murume akadai, anokwanisa kuita ma ORGASM anenge maviri kana matatu asi Ndeimwe chete yakareba, zvoreva kuti anenge anakigwa chose.
Dzidzisa murume wako kukunakira. Muratidze pane bhinzi ugomuratidza zvokuita nayo. Chitubu hachinyanyi kunetsa kuhwisisa. Kungopinza chombo murume wononoka kupedza kumirira mukadzi apedze. Bhinzi yakavanda uye idiki zvokuti ukasamuyeuchidza anokangamwa kuti kune bhinzi inoda kupiwa nguva.
Murume ane confidence yokuti ari kunakira mukadzi wake uye ane TOTAL FREE ACCESS pamukadzi, haatarisi vamwe vakadzi. Murume anohura kazhinji ane mukadzi aanotadza kugutsa kumba. Kutsvaka mahure kutsvaka mukana wekuudzwa kuti wagona iye asingagoni obva aenda kumba achifunga kuti "Pamwe ndinogona " Kwahi noumwe akambondinyora Kwahi "ndinokwira mukadzi asi mukadzi haaratidzi kunakigwa. Ndakaudzwa neshamwari yangu kuti mukadzi ane matinji madiki haanakigwi. Ndizvo here?"
Apa murume anenge atadza kunakira mukadzi wake, ozoona kuti mukadzi ane matinji madiki otsvaka Rhizeni yokusanaka kwake iye opomera mukadzi nokuda kwekuti iye ari kutadza mukadzi. Murume akadai dai aihwisisa mafambire ebhinzi hazvaimunetsa kugutsa mukadzi wake mumba. Ngatisanyeberana veduwee, bhinzi ikabatwa zvakanaka inonaka chose. Ukaona kuti mukadzi wako haasi kuratidza kuti ari kunakigwa panyaya yokumupinza chombo, imbozama kuti zviya ageza nemvura inodziya ropa riri pedo neganda, womupatsanura makumbo wonanzva pabhinzi nepanyama dzakatenderedza. Hazvigoni kutsanangurira munhurume kuti unohwa sei kana murume achinanzva bhinzi. Hazvitori nguva kuhwa fungwa yabitirigwa nokunakigwa, panhu pofazha separi kubhoiriwa.
Mumba munhu wese ane dambudziko raasingadi kugadzirisa kana kuti kana aneugino hwekurigadzirisa, anopa umwe wake mhosva kuti nyaya yacho isataugwa. Munhu akachenjera anobvunza zvaasingahwisisi oudzwa. Munhu akachenjera akabvunzwa mubvunzo, anotaura sezvazviri kuti umwe wake ahwisise. saka tafanokuudzai varume kuti
BHINZI INONAKA KUTAMBWA NAYO. ITAIWO NGUVA NEBHINZI DZEDU. BHINZI NDICHO CHOMBOKADZI. Mahwisisa here. Iwe murume unohwa sei kana mukadzi wako akangotamba nemabhora ako obva ati apedza. Pane mabhora ako ndipo pane chitubu chomukadzi wako. Pane chombo chako ndipo pane bhinzi yemukadzi. Chitarisa wega uone kuti panonyanyonaka ndepapi.
Herbert aiti anotya kukumbira mukadzi kunanzva bhinzi, Asi ndakazomunyorera ndikamuudza kuti ita nyaya mbiri. Yokutanga kujaira kugeza mese musina kunovata. Pakugeza apa jairai kubatana pamberi. Madaro murume jaira kuzopabatazve mava kuda kuvatana. Woita nguva uripo wokurudzira mukadzi kukubhenengurira uone pane bhinzi yake nokuti yakadii kana imire. Madaro garonanzva dumbu romukadzi nepazasi peguvhu uye kukisa muzvidya zvake uchipurudzira. Mangojaira kudaro hazvizokunetsi kuti umwe musi wongosvikapo pabhinzi wotanga nokunanzva kamwe chete woona kuti anodii. Wowedzera wowedzera wowedzera.
Chechipiri ukamupa chombo kuti ahwe taste yacho wotomuti akupewo pake uhwe taste yapo. Kana kumutanga avete hope kana ari munhu ajaira kuti munoisana umwe avete sezvinoita vakawanda vakaroorana. Mutange rurimi avete mambogeza henyu.
Kuti murume ahwisise bhinzi
Paya kana murume amira chombo unotsanangurira murume kuti kumira kwakaita chombo chake ndiko kumwe chete kumira kwakaita bhinzi yako. Zvadaro chimubvunza kuti ari kuda kunyanyotambwa naye nenhengo ipi yomuviri.
Kana ati chombo, iwewo chimuti atambise bhinzi nokuti ndizvo zvakafanana.
Kana ati mabhora ake, iwewo chimuti atambise matinji nokuti ndizvo zvakafanana.
Kana ahwisisa kusiyana kwekunaka kwazvo ahwisisa muviri wemunhukadzi.
Kuzoti pakupinzwa chombo ndoosaka vakadzi vashoma vachiita ORGASM nokupinzwa.
Murume ngaahwisizve kuti paunoita ORGASM nokupinzwa chombo nokukoigwa zvinobva nokuti pakukoira ari kunogumhagumha bhinzi kana nyama dzakatenderedza bhinzi, kana kuti paya wakafongora pakukoira kwake anoti achipinda mukati anodhonzana nenyama dziya zvoita sokuti dzakwizwa, uyezve anonodzibaye kana kudzikwiza nechombo achibva nomukati mechitubu. Kana wakafongora anobaya kwakananga kubhinzi.
Kotizve kana muchikoirana mukadzi akafongora, mabhora emurume anenge akarembera akanangana nebhinzi yomukadzi osvikoirova pamunosangana, zvikuru kana sipidhi yenyu iri shoma murume achinyatso svitsa chombo pachinogumira nemakurire acho. Pakurova bhinzi ipapo mukadzi anonakigwa nazvo.
Bhinzi ndicho chombo chomukadzi. Inonaka. Varume musakangamwa bhinzi veduwe.